မမဗိုက်များ အတွက်ပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » မမဗိုက်များ အတွက်ပါ။
Posted by ခင်ခ on Nov 14, 2012 in Health & Fitness, Relationships & Family | 29 comments
အခုရေးသားမျှဝေမယ့်အကြောင်းအရာများသည် ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ သားဖွားမီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ မြင့်မောင်မောင် နှင့် ဆွေးနွေးမှု့များ၊ မေးမြန်းဖြေကြားမှု့များ ပြုလုပ်သည့်အကြောင်း အရာကို အခြေခံ၍ ထုတ်ဝေထားသော ဆေးပညာစာအုပ်များမှ ကောက်နုတ်တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝင်ဆောင်မိခင်များ ဘယ်အချိန် ဗိုက်အပ်သင့်လဲ
အများအားဖြင့် ဗိုက် (၇)လ ကျော်မှာအပ်ကြပါတယ်၊ အဲဒါနဲ့ပက်သက်ပြီး နည်းနည်းဆွေးနွေးပြောမယ် ပထမ ဆုံး သွေးစထိမ်သွားပြီ ရက်ကျော်သွားပြီဆိုတာနဲ့ မိခင်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု့၊ ၀မ်းသာမှု့၊ စိုးရိမ်မှုတွေ အများ ကြီး တစ်ပြိုင်တည်းပေါ်လာတယ်၊ နောက်ပြီး မူးတယ်၊ အနည်းငယ်ပျို့ချင်တယ်၊ တစ်ချို့ အမျိုးသမီး တွေ ဒီလိုဖြစ် တာ အရမ်းဆိုးတယ်၊ အော့တယ်၊ အန်တယ်၊ အစာလုံးဝလက်မခံဘူး၊တစ်ချို့ကျတော့ အဖတ်လက်မခံဘူး၊ ကိုယ်ဝန်စရှိပြီး ရက်ပိုင်း သို့မဟုတ် တစ်ပတ်၊နှစ်ပတ်၊ သုံးပတ်ကျော်မှ စဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ အဲလို အမျိုးသမီး မှာဖြစ်ရင် အမျိုးသားကလည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး သူတို့စိတ်ထဲမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတာတော့သိနေပြီပေါ့။ အဲဒီမှာအတော်များများ အထွေအထွေရောဂါကု နီးစပ်ရာဆရာဝန်ထံပြကြတယ်၊ အဲဒီမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိတာကြောင့် လို့မတွေးဘဲ မူးတာ အော့အန်တာ သက်သာပျောက်တဲ့ဆေးပေးကြတယ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရဲ့ ပထမ ၃-၄ လ မှာ သန္ဓေသားဟာအထဲမှာ ကလီစာတို့ ကိုယ်တွင်းအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ ပေးလိုက်တဲ့ဆေးဟာ အခန့်မသင့်ရင် သန္ဓေသားအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီး မူမမှန်တဲ့ချို့ယွင်းမှု့တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပျို့အန်တာ အတွက် အစောပိုင်းပေးတဲ့ဆေးတွေဟာ ကလေးမှာထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိမပြုမိကြတဲ့သူတွေအတော် များပြီး ၇ လကျော်မှ OG ထံဗိုက်အပ်တတ်ကြပါတယ်၊ အမှန်တော့ ကိုယ်ဝန်စတည်ကထဲက OG ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
အဲဒီမှာဆက်ပြောရရင် ပထမ ၃ လ ဟာအရေးကြီးပြန်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သားဦးဘဲဖြစ်ဖြစ် သားနှောင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် သားလျောသားပျက်ဖို့ အခွင့်အလန်းရှိတတ်သလို၊ ၃ လကျော်ကစပြီး သားလျော သားပျက်ဖို့ အခွင့်အလန်းနည်းလာသလို ၅ လကျော် ကလေးလှုပ်တဲ့ အချိန်မှာဆိုရင်တော့ စိတ်ချရတဲ့ သဘောရှိပါတယ်၊ အဲဒီတော ၇ လမှာဗိုက်အပ်ကြတယ်ဆိုတော့ စိတ်မချရမယ့် အချိန်တွေမှာ မအပ်ဖြစ်ဘဲ အလျဉ်းသင့်သလိုနေကြတာလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အခြားကိုယ့်ရောဂါ အခံရှိရင်လည်း ကြိုပြီး ကုသင့်တာကိုပြုလို့ရနိုင်တဲ့ အချိန်ဖြစ်စေမှာပါ၊ ဥပမာ- ဆီးချိုလိုမျိုး၊ သွေးအားနည်းတာမျိုး စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ၇ လ ဗိုက်အပ်မှဆို အဲဒီအခြားရောဂါတွေကုဖို့နဲ့ မွေးချိန်နီးသွားနိုင်ပါတယ်၊ တစ်ချို့ဆို ၇ လနဲ့ သွေးဆင်းပြီး စောစောမွေးတတ်တာလည်းရှိတယ်လေ။ ဒါကြောင့် အကြံပေးချင်တာကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၃ လထက် နောက်မကျဘဲဗိုက်အပ်ဗိုက်ပြထားရင် အင်မတန် အကျိုးကျေးဇူးထူးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာများ
၁။ ကလေးအနေအထားမှန်ဘူး၊ ရိုးရိုးပုံမှန်အစား တင်ပါးဆုံဖြစ်နေတာ၊ ကန့်လန့်တည်နေတာ၊ အခြားမမွေး နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ခြင်း – ဒါတွေဟာစောစောသိရင် ကောင်းပါတယ်၊ ဥပမာ တင်ပါးဆုံနဲ့ နေတာ သိရင် သင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာ ပြင်ပေးလို့ရနိုင်တယ်၊
၂။ နှစ်မြွာသုံးမြွာဖြစ်နေတာ – အမြွှာကြောင့်သွေးတိုးတတ်တယ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်ပိုတက်တတ်တယ်၊ အမြွှာတွေ ဟာစောစောမွေးတတ်တယ်၊ ဒါတွေကြိုသိရင် မိခင်ရောကလေးအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တယ်၊
၃။ မမွေးခင်သွေးဆင်းတာ – အချင်းရှေ့ရောက်လို့ သွေးဆင်းတာတို့၊ အချင်းကွာလို့ သွေးဆင်တာဖြစ်တယ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နေထိုင်မှု့အပေါ်မူတည်နိုင်လို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသလိုနေထိုင်သင့်ပါတယ်၊
၄။ ကိုယ်ဝန်အဆိပ်တက်တာ – ဒါဟာ ဆေးပညာအရ ရောဂါမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ်ဝန်ရှိတုန်းဖြစ်တတ်တာပါ၊ ခြေတွေလက်တွေ ဖောရောင်တာ၊ သွေးတိုးတက်တာ၊ ဆီးစစ်ကြည့်ရင် ဆီးအနည်ထိုင်တာ၊ ပရိုတင်း အသား ဓာတ် ဆီထဲမှာရှိနေတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၆။ မမွေးနိုင်ဘဲ အမွေးကြာတယ်၊ အဲဒီကျ သားအိမ်ညှစ်တာများလွန်ပြီး ကလေးက ကန့်လန့်ဖြစ်နေရင် သားအိမ်ကွဲနိုင်ပါတယ်၊
၇။ အနေအထားမမှန်တာကို ခွဲမမွေးရင် မွေးနေတုန်း ကလေးဒုက္ခရောက်တတ်ခြင်း
၈။ သွေးတစ်ခါ ထပ်ဆင်းခြင်း။
၉။ သန္ဓေသားလွဲမှားတည်ခြင်း၊ စောစီးစွာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပြုမူနေသင့်သည်။
မွေးဖွားမယ်ဆို ဆေးရုံမှာမွေးသင့်ပါတယ်၊ အကယ်လို့ အိမ်မှာမွေးရင် လွတ်လပ်တာမှန်ပေမယ့် အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတဲ့အခါ မထင်မှတ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ ဥပမာ- အိမ်မှာမွေးပြီး သွေးဒလဟောဆင်းနေမှ ဆေးရုံအမြန်ပို့ရင် အခန့်မသင့်ပါက သွေးထွက်လွန်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်၊
နောက်တစ်ခုက နို့တိုက်ခြင်းဆိုတာပါ၊ နို့တိုက်ခြင်းကို မွေးပြီးမှ အစပြုတာလို့ ထင်ကြတယ်၊ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ခပ်စောစော ကိုယ်ဝန်အပ်ကထဲက ရင်သားဖွံဖြိုးမှု့ရှိသေးရဲ့လား၊ နို့သီးခေါင်းပုံမှန်ရှိရဲ့လား၊ အထဲချိုင့်ဝင်နေလား၊ ကျားပစပ်လိုဖြစ်နေလား၊ ဒါတွေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူ မိခင်က ကြည့်ရမှာဖြစ်ကာ ဗိုက်ပြတာနဲ့အတူ ဆရာဝန်ကိုတိုင်ပင်ရမှာဖြစ်ပြီး ပြုပြင်သင့်တာပြုပြင်ထားရမှာပါ။ နို့တိုက်ခြင်း ပုံမှန်ဖြစ်တည် မှု့မှာ ကလေးမွေးပြီး ပထမ ၂ ရက်က နို့ဦးရည်ထွက်တယ်၊ ၃ ရက်မြောက်ကစပြီး နို့အဖြူထွက်တယ်၊ ၅ ရက် တစ်ပတ်လောက် နို့တိုက်လိုက်တာနဲ့ ကလေးကိုနို့တိုက်တတ်သလို ပုံမှန်လည်ပတ်သွားတာပါ။ မိခင်နို့တစ်မျိုး တည်းကို ၄ လထိတိုက်ကျွေးသင့်ပါတယ်၊
မမခိုင်နဲ့ မမဗိုက်များ ဗဟုသုတရအောင် ဖတ်ဖူးတဲ့စာပေထဲက ရေးပြီးသမျှကို မျှဝေလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ နောက်ပိုင်းလည်း မမဗိုက်များ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေ ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ထဲက ပြန်ဝေမျှပါအုံးမယ်ဗျာ။
အစ်ကိုကြီးကိုခင်ခကို ကျွန်တော်နားမလည်တာတစ်ခုမေးချင်လို့… ဟိဟိ…
ဆြာဝန်လား… Health Digest မှာ စာရေးလားဟင်… ဟိဟိ
ပထမဆုံးကွန်မန့်ပေးလာသူ မမဗိုက်ရဲ့ ကလေးအမည်ပေးကင်မွန်းတပ်ရင် ခင်ခကလက်ဆောင်လေး
ပို့ပေးမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားတာ၊ ခုတော့ လွဲပါပေါ့ကွယ်။
ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ မေးထားတဲ့ အမေးနှစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ ဖြေမယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်နဲ့လဲဗျာ။
အခုတလော အစ်ကိုကြီးရဲ့ ကျန်းမာရေးစာတွေဖတ်မိရင်း… ဦးဘလက်ချောတုန်းက ကျွန်တော်မေးဖူးတာလေးသတိရလို့ မေးလိုက်တာပါ…
ဦးဘလက်ချိုပေါ့ကျတွေရေးတုန်းက ကျွန်တော်မေးဖူးတယ်… ဦးဘလက်ဂျာနယ်ရောင်းလားလို့…
အခုလဲ အစ်ကိုကြီးခင်ခကို အဲလိုမေးခြင်းပေါ့ဗျာ… အမှတ်တရပေါ့…
အချိန်ကလည်း ကျွန်တော့်အတွက် အရမ်းနည်းပါးနေလို့ပါ…။
ဦးဦးခရေ … မနက်က ရွာထဲဝင်နေတာ လိုင်းကလေးနေတယ် … မိတိုက်ရဲ့ မီးပုံးမှာကော်မန့်ပေးပြီး ဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူး ….. အခုလည်း အိမ်သာပို့စ်ဝင်ဖတ်နေတုန်း တစ်ခြားအလုပ်ကလေးပေါ်လာတော့ သွားလုပ်လိုက်တာ … ဒီကြားထဲ ဦးဦးခကတင်လိုက်တော့ မမှီတော့ဘူးပေ့ါ …..
မမခိုင် ၀င်ဖတ်သွားတာသိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း မနက်ကွန်သိပ်မကောင်းလို့ နေ့လည်ကမှ ပိုစ့်တင်ဖြစ်တာလေ။
မမဗိုက် မဟုတ်သူ မွန်ကစ်လည်း ကြိုတင်သိရှိရန် ဗဟုသုတအနေနဲ့ အားပေး ဖတ်ရှုသွားပါတယ်နော်…
သိသိကြီးနဲ့မေးမှန်း သိပ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ၊ ဒါပေမယ့်လည်း အမေးရှိရင် ဖြေဖို့တာဝန်က ရှိပြန် သမို့ဖြေရတာပါ။ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် ကျွန်တော်က တိုင်းရင်းဆေးဆရာဝန်တစ်ချို့စုစည်းပြုလုပ်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ထောက်ပံမှု့အသင်း တစ်ခုမှာတော့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပံပိုးပါတယ်ဗျ။
အိမ်က ဗိုက်ပူမ ရှင်မွေးလွန်းကို ဖတ်ခိုင်းရမယ်.. ကျေးကျေးဗျို့
မမဗိုက် ယောက်ျားအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေ တင်ပေးအုံးနော်
ကိုယ့်မှာ မိန်းမလည်းမရှိတော့ လောလောဆယ် ပူရမယ့် ဗိုက်လည်းမရှိပါ…..
ကိုယ်ဝန်ပျို့ အန်ခြင်းကို သာမန် ခေါင်းမူးပျို့ အန်ခြင်းနဲ့ မှားပီး ဆေးပေးတယ်လို့ ရေးထားသလိုပဲနော်….
ဘယ်လို ခွဲခြားနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါရစေ…..
တခါတလေ စနစ်တကျ ကိုယ်ဝန်တားဆေးသုံးသော်ငြားလည်း မတော်တဆ ရသွားရင် စာရေးသူ ပြောသကဲ့သို့အမှားများ တွေ့ နိုင်လို့ ပါ……….
အိမ်က .. အဲ .. နန်းတော်က ကျုပ် မိဖုရားဂေါင်ဂျီးအတွက်
နန်းတော် ရောက်လို့ အနောက်ဆောင် ဝင်တော်မူရင်
အိုက်ဂလို မိန့်ဒေါ်မူမည် …
အဲ မမဗိုက် ယောက်ျားအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တော့ ကိုယ့်မမဗိုက်ကို လက်တို့ပြီးတာမေးလိုက်ပါ၊
တိမ်မည်းကလည်း ကျွန်တော်မှကိုယ်ဝန်မဆောင်ဘူးတာ ကိုယ်ဝန်ပျို့အံတာ ဘယ်လိုပြောရမလဲဟင်၊ ရင်းနှီးတဲ့ မမဗိုက်ကိုမေးကြည့်ပါလားဟင်။
အန်ကယ်ကြီးရေ ဘယ်လိုပြန်မန့်ရမှန်းတောင် သိတော့ဘူးဗျာ။
သင့်မြတ်လှကြောင်းပါ အရှင်မဟာရာဇာ အံစာတုံး ဘုရား။
ဦးဦးခရေ .. ဒီပို့စ်လေးတင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ညီမက ပထမဗိုက်တုန်းက သိသိခြင်း OG ထံမှာ အပ်ပါတယ် … သက်ဦးလည်းဖြစ်တယ် အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ သန္ဓေသားပျက်စီးမှာစိုးလို့ သည်းသည်းလှုပ်ပေ့ါ .. အခုရင်သွေးကိုတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ သိသိချင်း (၄) ပတ်လောက်မှာ အန်ချင်တာတွေ ခေါင်းအုံတာတွေ ဖြစ်တာကြောင့် နီးစပ်ရာ OG ကိုချက်ချင်းသွားပြခဲ့တယ် … ဒါပေမယ့် OG ချိန်းသလို ၁ လပြည့်တော့ သွားပြန်မပြဘူး … ၃လလောက်မှ ထပ်ပြတယ် … OG ကတော့ Folic Acid ပဲသောက်ခိုင်းတယ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးတွေ မတိုက်ပါဘူး … အန်ချင်သလိုဖြစ်နေတယ်ဆို ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးတွေ သောက်လို့မရဘူးတဲ့ … အစာအိမ်ကိုထိခိုက်တတ်တယ်လို့ပြောပါတယ် … အမှန်ပြောရရင် ဒုတိယ ရင်သွေးလေးအတွက် OG ကိုပုံမှန်မပြဖြစ်ခဲ့ဘူး …
ဦးဦးခရေ … ဗဟုသုတလေးတွေရှိရင် ထပ်တင်ပေးပါဦးနော် …
Khaing Khaing ရေ…
ဟိုဖက်က မမိုချိုရဲ့ ပို့စ်ရယ်.. စိန်ဗိုက်ဗိုက်ရဲ့ ပို့စ်ရယ်ကို ဖတ်ပြီး ရီရတာပါးညောင်းလာလို့ ဒီပို့စ်ကို ဗဟုသုတအတွက် ၀င်ဖတ်ဖြစ်တာ .. အခု Khaing Khaing ရဲ့ comment မှာ သားဦးကို သက်ဦးလို့ စာလုံးပေါင်းထားတော့ ရုတ်တရက်ကြောင်ပြီး သက်ဦးဖြစ်တာ ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ လို့ တွေးမိသွားတယ်.. :harr:
မမစမ်းနှင်းဆီ …. သားဦးလို့ပြောရတာလား … မသိပါဘူး … စကားပြောရင် သက်ဦးကလေး သက်ဦးကလေးနဲ့ အလွယ်ပြောမိတော့ အဲလိုပဲ ရေးမိသွားတယ် …….
ပါးညောင်းတဲ့ပို့စ်လေး တွေလည်းသွားဖတ်ဦးမှ … ညီမကအရီသန်တယ် သူများမရီရလည်း ညီမအတွေးနဲ့ညီမရီနေတတ်တယ် …….
မိခင်နို့တစ်မျိုး တည်းကို ၄ လထိတိုက်ကျွေးသင့်ပါတယ်.. ဆိုတာလေးကိုတော့ ..
နဲနဲ စောဒကတတ်ချင်ပါတယ်ဗျာ ..
မိခင်တွေ မှာ နို့ရည်ထွက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နို့ပူ ၊ နို့အေးဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်..
နို့ပူကတော့ .(နို့ရည်ကကျဲပါတယ်) အာဟာရ နဲ့ ကြီးထွားမှု မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။
နို့ အေးက တော့ (နို့ရည်ကပြစ်ပါတယ်)
ဂျူးမရဲ့ ညီမ ကလေး မွေး တော့ လက်တွေ့ သိခဲ့ရတာပါ ..
ညီမလေးက နို့ရည်ကျဲပြီးတော့ နို့ကလည်းအသင့်အတင့်လောက်ပဲ ထွက်တဲ့အနေအထားပါ..
အဲဒါကို ကလေးဆရာဝန်က ကလေး ၄ လအထိ မိခင်နို့ရည်တစ်မျိုးတည်းသာတိုက်ရမယ်ဆိုတော့ ..
ဆရာဝန်စကားနားထောင်ပြီး ကလေးကို မိခင်နို့ပဲ တိုက်လိုက်တာ …
ကလေးက ကြာလေ သေးလေ ဖြစ်လာတော့ တာပါပဲ .. အဖြေရှာတော့ လဲ ရောဂါကမတွေ့
မွေးဖွားစဉ်တည်းက မိခင်နို့အာဟာရကို လုံလုံလောက်လောက်မရခဲ့တဲ့ကလေးဟာ ၄ လပြည့်လို့ တခြား ဖြည့် စွက် အာဟာရတွေ ကျွေးပေမယ့်လည်း ကြီးထွားမှု မရှိတော့ပါဘူး…
မိခင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါလည်း နို့ရည်မှာ ပြသနာရှိလာနိုင်ပါတယ် ..
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးလေးတွေ ရှိတတ်တယ်ဆိုတာလည်း သတိထားစေချင်ပါတယ်….
လက်တွေ့သဘော ၀င်၍ပြောလာသော ရွာသူ jujuma ရဲ့ ကွန်မန့်ပါ လေးကိုလည်း မှတ်သားကာ မမဗိုက်များရဲ့ OG ဆရာဝန်တွေနဲ့ ပွင့်လင်းကာတိုင်ပင်ပါလို့——-နော်။
၀င်ရောက်ပြီး ဖတ်မှတ် လေ့လာသွားပါတယ်ဗျာ…………
ကိုခရဲ့knowledge ကိုတော့ ချီးကျူးမိပါတယ်ဗျာ။ ညားခါစအမျိုးသမီးတွေရော၊ကလေးယူမယ့်အမျိုးသမီးများအတွက်တော့ အဖိုးတန်လှတဲ့ပိုစ့်လေးပါပဲ။ ဗိုက်ကတော့ စောနိုင်သလောက်စောစောအပ်တာကောင်းပါတယ်။ ဆေးရုံမှာပဲ မွေးသင့်ပါတယ်။ အခက်ခဲရှိရင်တော့ ဆရာဝန်လည်းမရှိ သူနာပြုလည်းမရှိတဲ့ နေရာဆိုရင်တော့ လက်မှတ်ရသားဖွားဆရာမတွေဆီမှာ မွေးပါ။ အဲဒါမှအဆင်မပြေလျှင်တော့ ရွာကလက်သည်ပဲ အားကိုးရမှာပေါ့။မွေးပြီးရင်လည်း ကလေးလေးကို အသက်အရွယ်အလိုက် ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးဖို့ လည်း မမေ့သင့်ပါဘူး။ မိခင်နို့ ကတော့ သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးပဲနော်။ နို့ တိုက်လို့ မရတဲ့ မိခင်တွေကတော့ ဆရာဝန်ကြီးများနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး နို့ မှုန့် တိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်မန့်လေးတွေနဲ့အားပေးခဲ့သူ ခိုင်ဇာ၊ ပိတောက်မိုး၊ ကိုအေကေကေအို ၊ မြန်မာအိုဆာကာ တို့ကိုကျေးဇူးပါဗျာ။
ကိုအေကေကေအိုရေ ခင်ခက စာဖတ်သာဝါသနာပါလို့ရယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ စာတွေကို ပိုပြီးဖတ် ဖြစ်တာများလို့ပါ။ ချီးကျူးလောက်အောင်လည်း မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာပေတွေကို အဖတ်များတာလည်း ဒီလိုရှိပါတယ် တိုင်းရင်းဆေးဆရာဝန်များ သက်ကြီးရွယ်အို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပံပိုးမှု့အသင်း(မန်း)ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးမှာ ပါဝင်နေတော့ သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ အခါကိုယ်လည်းဆွေးနွေးပြောလို့ရအောင်ရယ် သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေရယ် ပြီးတော့ စိတ်ဝင်းစားလို့ဝယ်မိတဲ့ ဆေးပညာစာပေတွေရယ်ကနေ ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့ ရွာသူားတွေကိုလည်း စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောတဲ့သဘော ပြန်ရေးပေးနေမိတာပါ။ ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ အသင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု ကလည်း ကျန်းမာရေးအသိတစ်ခုမိမိရရင် မိမိအနားရှိသူလည်းသိပါစေတဲ့လေ။
ယောက်မတုန်းကတော့ ပျို့အန်တာ(morning sickness ထင်တယ်) မရှိဘူး..
သူက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တစ်လျှောက်လည်း ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်..
မွေးပြီးတော့ ကလေးက နို့ကောင်းကောင်း မစို့တတ်သေးခင်မှာ မစို့လို့
နာ့စ်က စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကလေးကို နို့စို့မကျင့်ပေးဘဲ ၃ရက်မြောက်မှာ နို့ဘူးနဲ့
သွားတိုက်လိုက်မိရာက တူလေးက အလွယ်နဲ့နို့ပါးစပ်ထဲဝင်တဲ့ နို့ဘူးကြိုက်ပြီး
အမေနို့ ကြိုးစားပြီးမစို့တော့ဘူး..ဘယ်လိုစို့ခိုင်း၊စို့ခိုင်း မစို့တော့ဘူး..နာ့စ်က
အလွယ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာလို့တော့ ပြောတာပဲ….သူ့အမေရှိရာ သွားမွေးတော့
ကိုယ်လည်းမတွေ့ရတော့ နာ့စ်မှားတာလား၊အမေက ဇွဲမရှိတာလား၊နို့မတိုက်ချင်
တာလား..သေချာမသိဘူးပေါ့…. မိခင်လည်း နို့တင်းတဲ့ဒဏ်တွေခံရ၊ နို့ကိုလက်နဲ့
ညှစ်ပြီး နို့ဘူးထဲထည့်ပြီး(နို့သီးခေါင်းလည်းနာရ)ကလေးကို တိုက်ရတော့တယ်..
မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း ၆လ တိုက်ကျွေးရမယ် ဆိုတာဝေးလို့…၁လခွဲလောက်
အဲ့လိုတိုက်ပြီး အဲ့နောက်တော့ Dumex နဲ့ပဲ နှစ်းပါးသွားရတော့တာပဲ….
နှင်းနှင်းငယ်ငယ်တုန်းက မေမေက နို့မထွက်လို့ နို့မှုန့်ပဲသောက်ခဲ့ရတယ်လို့
အများသူငှာတိုက်တဲ့ နို့မှုန့်(နို့မှုန့်ဝယ်ထွက်ရလို့ နို့မှုန့် ၁ဘူး ၂သောင်းကျော်၊
သုံးသောင်းကျော်တန်တွေလည်း တွေ့ပါတယ်) တစ်ပတ် ၂ဘူး၊တစ်လ ၈ဘူးနဲ့
နို့မှုန့်ဖိုးတင် လစဉ် ၇၈၈၈၀…ယောက္ခမက မြေးမျက်နှာနဲ့အစစအရာရာ
တစ်ကယ်တော့ ကလေးအတွက် မိခင်နို့ထက်ကောင်းတာ ဘာမှ မရှိပါဘူး…
အတတ်နိုင်ဆုံး မိခင်နို့သာ တိုက်ကျွေးခြင်းသာ အကောင်းဆုံးပါ…
(ဂျူဂျူးပြောသလို နို့ပူဆိုရင်တော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့..မတွေ့ဖူးသေးလို့)
မှတ်မိသလောက် မိခင်နို့စို့တဲ့ကလေးက ရောဂါခုခံအားကောင်းတယ်..
ကလေးနဲ့မိခင်ကြား သံယောဇဉ်မေတ္တာတွေကို တိုးပွားခိုင်မြဲစေတယ်…
မနှင်းနှင်းရေ အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ ဗဟုသုတရစရာလေးတွေ ဝေဌပေးလို့ အလွန်ကျေးဇူးပါဗျာ။
သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်တိုင်းကတော့ မိခင်နို့တိုက်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သုတေသနအရ ငယ်ငယ်က မိခင်နို့ရည်တိုက်ကျွေးခဲ့ရင် ကြီးလာတဲ့အခါ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်း မွန်ပြီး ရောဂါကိုပြန်လည်ခုခံနိုင်စွမ်းကောင်းစေတယ်လို့လည်း မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးရေးကို ကျန်းမာရေး ဌာနတွေကနိုးဆော်ကြတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကာယကံရှင် မမဗိုက်များဆန္ဒအတိုင်းပါဘဲလေ။
မိခင်နို့မစို့တော့ တူလေးကို နို့ညှစ် ဘူးထဲထည့်တိုက်ရတာ..တစ်နေ့ အသေးဆုံး
နို့ဘူးအပုလေး(140 ml ထက်သေးမလား..မေ့သွားလို့) ၂ဘူးကနေ ၃ဘူးအထိ
ရတယ်..တိုက်တယ်..အဲ့တာနဲ့ လုံးဝမလုံလောက်ဘူးလေ..ဒါကြောင့် Dumex ပါ
ထပ်ဖြည့်ပြီး တိုက်ခဲ့ရတယ်…၁လခွဲ နောက်ပိုင်းမှသာ Dumex သက်သက်ပဲတိုက်
ခိုင်ခိုင်အတွက်လည်း ကူမန့်ပေးမလို့ မနက်က မိခင်လောင်းတွေအတွက်
ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်တွေ file တွဲပြီး သိမ်းထားတာ ရှာကြည့်သေးတယ်..ရှာလို့မတွေ့လို့..
ကျုပ်ရဲ့ဘီယာဗိုက်လေးအတွက်လဲ ရေးပေးပါဦးခင်ဗျ
ဆရာပေရေ ဘီယာဗိုက်အကြောင်းကို လက်တွေ့ကျကျ ဘီယာထိုင်သောက်ရင်း